Human comes from Dolphin
by zayarlusoe.123 on Tue 23 Mar 2010, 15:22
လူတွေကမျောက်ကဆင်းသက်လာတာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးတဲံ့.....လင်းပိုင်ကလို့ ပြောပြန်ပြီ၊၊လင်းပိုင်မှာရှိတဲ့Amino acid တွေကလူမှာရှိတဲ့Amino acid တွေနဲ့ တော်တော်တူတယ်ဆိုပဲ၊၊ :affraid: :affraid: :study: :study:
Re: Human comes from Dolphin
by kozaw(OCG) on Thu 25 Mar 2010, 17:36
Location : တာမွေ၊ရန်ကုန်
by thirizaw on Mon 29 Mar 2010, 17:57
လူကမျောက်ကလည်းဟုတ်ဘူး ..လင်းပိုင်ကလည်းဟုတ်ဘူး..လူဆိုတာလူကပါပဲဟာ ..ဟဲဟဲ
လင်းပိုင်ကဆို ..ခုရှိနေတဲ့လင်းပိုင်တွေ ဘာလို့ လူမဖြစ်သေးတာလဲ..
လူတွေကရော...?????????????????? :geek: :geek: :geek:
Location : KMDG/YGN
by kozaw(OCG) on Mon 29 Mar 2010, 18:03
by kyaw linn on Thu 01 Apr 2010, 21:41
ဘေးမချော်ကြနဲ့ လို့ ပြောတာ................
by သက်နိုင်ထူး on Thu 20 May 2010, 13:47
zayarlusoe.123 wrote: လူတွေကမျောက်ကဆင်းသက်လာတာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးတဲံ့.....လင်းပိုင်ကလို့ ပြောပြန်ပြီ၊၊လင်းပိုင်မှာရှိတဲ့Amino acid တွေကလူမှာရှိတဲ့Amino acid တွေနဲ့ တော်တော်တူတယ်ဆိုပဲ၊၊ :affraid: :affraid: :study: :study:
Amino acid တစ်ခုထဲကြည့်ပြီးတော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဂျာနယ်တွေက ဖွတိုင်း မယုံကြပါနဲ့
by Star9 on Thu 20 May 2010, 20:31
ကြီးကြပ်ရေးမှုးကြီးေ၇ ဘယ်က ဘယ်လို ဘယ်သူရေးတာကို ရှာတွေ့လာလဲဗျ ....
အထောက်အထားခိုင်လုံရင်တော့ ကောင်းသားနော် .....
တခုခုတော့ အညွှန်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ပြောသင့်တယ်ထင်တာပဲ ....
အဲ့လိုကြီးပဲ ဘာမှ အထောက်အထားမပါပဲနဲ့ဆိုတော့ ကောင်းပါဘူးဗျာ ...။